पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल र रास्ट्रपति ट्रम्पबारे अनेकौ किस्सा !
यो खबर सार्वजनिक भएपछि आई.टी. टचले सन् २०११ मा स्टोर्मीसँग गरेको अन्तरवार्ताको पूर्ण पाठ आफ्नो अनलाइनमा राख्यो । अन्तरवार्तामा स्टोर्मीले ट्रम्ससँग सन् २००६ मा एक वर्ष चलेको सम्बन्धबारे बालेकी छिन् । अन्तरवार्ता दिनुअघि स्टोर्मीले पोलिग्राफिक टेस्ट दिएकी थिइन् । पोलिग्राफ टेस्टमा स्टोर्मीलाई सम्बन्धको विभिध पक्षमा प्रश्न सोधिएको थियो । टेस्टमा उनले बोलेको कुरा साँचो देखाएको थियो । तल सोही अन्तरवार्ताको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्ट्रोमी : लेक तहोईमा च्यारिटीका लागि गरिएको गल्फ प्रतियोगितामा भेटेकी थिएँ । मलाई लाग्छ उनी त्यहाँ गल्फ खेल्न आएका थिए । मैले काम गर्ने कम्पनीले गिफ्ट रूममा सहभागिता जनाएको थियो, त्यसैले म गएको थिएँ । पहिलो पटक मैले उनलाई गल्फ कोर्समा भेटेकी थिएँ । तिनले हामीलाई वरपर घुमाइरहेका थिए । त्यसक्रममा उनले मलाई हेरिरहेका थिए र त्यहीँ हामीलाई परिचय गराइयो । उनलाई सबैमाझ परिचय गराइयो ।
पछि पनि उनी मलाई हेरिरहेका थिए । पछि हामी एउटै गाडीमा अर्को ‘होल’सम्म गयौँ । सो क्रममा उनले ‘म तपाईसँग पछि कुरा गर्न चाहन्छु’ भने । पछि उनी गिफ्ट रूममा आउँदा उनले मलाई भेटे । त्यो बेलाउनले मसँग आफ्नो नम्बर मागे र मैले दिएँ । त्यसपछि उनले मलाई त्यो रात डिनर खान चाहनुहुन्छ भनेर सोधे । मैले ‘निश्चय नै हुन्छ’ भने । कसले यस्तो रोचक मानिससँग गफ गर्ने अवसर गुमाउन चाहन्छ ? मैले उनीसँग डेट गर्ने वा अरू केही गर्ने सोचेकी थिइनँ ।
म उनको कोठामा गएँ । त्यसपछि किथले ‘ए आउनुभयो, उहाँले तपाईंलाई भित्र पर्खिरहेका छन् ।’ भने । म भित्र गएँ । म सजिएर आएकी थिएँ किनकि मलाई डिनरका लागि बाहिर जाने होला भन्ने लागेको थियो । तर उनी भने कोठामै खाना खाने सोचिरहेका रहेछन् । उनी त सामान्य पोसाकमा थिए । मैले उनलाई यस विषयमा ठट्टा गरेको याद छ । मैले यो किन सम्झिरहेकी छु भने म कोठामा पस्दा उनी सोफामा पल्टेर टिभी हेरिएका थिए । उनी पाइजामामा थिए र मैले उनलाई भने ‘हाहा के हेफ्नरलाई (प्लेब्याई पत्रिकाका संस्थापक) तपाईंले उनको पहिरन चोरेको थाहा छ ?’
खासमा म उनीसँग निक्कै रुखो रूपमा प्रस्तुत भएकी थिएँ । त्यसपछि उनले परिस्थितिलाई हल्का बनाउन भनँे– ‘ए, मैले त यहीँ आरामसँग बसेर खाऔं भनेको,’ भने । अन्त्यमा हामीले उनकै कोठामा डिनर खायौँ । हामीले के मगाएको थियौँ, त्यो त सम्झँदिनँ तर हामीमध्ये कसैले पनि रक्सी भने खाएका थिएनौं । कामको समयमा म रक्सी खादिनँ । खासमा म धेरै रक्सी खादिनँ । रक्सीको विज्ञापनका लागि फोटो खिचाउँदा पनि मेरो हातमा भएको गिलासमा ‘रेड बुल’ हुनेगर्छ । उनले पनि रक्सी लिएका थिएनन् । मैले कहिले पनि उनले पिएको देखिनँ । सायद उनी पिउँदैनन् होला । हामी केही समय गफियौं । उनले मेरो व्यवसायको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधे । सबै प्राविधिक प्रश्न थिए । उनी निक्कै जिज्ञासु थिए ।
प्रश्नहरू यौनसम्बन्धी होइनन् अरू नै थिए । उनले यो क्रममा पटक पटक उनको फोटो आवरणमा भएको म्यागजिन देखाए । त्यो कुनै कर्पोरेटसम्बन्धी म्यागजिन थियो । अहिले त्यसको नाम सम्झन सकिनँ । तर यो उनको कोठामा थियो र उनले मलाई पटक पटक त्यो देखाइरहे । मलाई भने ‘यार म तिमी को हौ चिन्छु’ भन्ने खालको सोच आइरहेको थियो । मलाई लाग्छ, उनी मलाई प्रभावित बनाउन खोजिरहेका थिए । हाम्रो पहिलो भेटमा अझ त्यो भेटको सुरुवाती केही घण्टा उनले मलाई प्रभावित पार्न खोजेको झैं लागेको थियो । उनले मलाई त्यो म्यागजिन देखाएर ‘यहाँ हेर त, यसमा म राम्रो देखिएको छुइनँ त ?’
स्टोर्मी : हो, त्यो अवधीभर कोही पनि भित्र आएनन् । अङ्गरक्षक किथ बाहिर उभिरहेका थिए । हामी अनेक विषयमा कुरा गरिरहेका थियौं । म उनले सोधेको सम्झन्छु ‘तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, नरिसाउ है ?’ सोधे । मैले सोध्न भने । मैले अश्लील खालको प्रश्नको आशा गरेको थिएँ तर त्यो त्यस्तो थिएन : त्यो मैले कुनै चीजबाट मैले रोयल्टी बापत कति पाउँछु भन्ने थियो ।
मैले पनि उनलाई पछि भने ‘म पनि तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु तर यसले चाहीँ रिस उठ्नेछ ।’ मैले उनको कपालबारे प्रश्न सोधें, ‘यार यो कि यस्तो छ ?’ र उनी हाँसे र भने ‘तिमीलाई थाहा छ, सबै मेरो कपालबारे चाख दिन्छन् र यसका लागि विभिन्न सुझाव दिन्छन् ।’ त्यसपछि मैले भने ‘तिमी चाहिँ यसमा केही बदलाब गर्न चाहँदैनौ ?’ उनले आफूले कपाल काटेमा आफ्नो पैसा र शक्ति गुमाउँछु जस्तो लाग्ने बताए । यो सुनेर म बेस्सरी हासें ।
स्टोर्मी : हो, हुन त धेरै अगाडिको कुरा भएकाले हामीबीच भएको संवादको शृङ्खला ठ्याक्कै सम्झन नसकेको हुन सक्छु, त्यसपछि उनले ‘तिमी निक्कै चलाख छौ । तिमी मूर्ख जस्तो लाग्दैनौं ।’ भने । मेलै धन्यवाद भन्दै उनले के भन्न खोजेको सोधें । उनले भने ‘तिमी मेरो सो(अमेरिकी च्यानल एन.बी.सी.बाट आउने ‘रियालीटी सो’ द अप्रेन्टिस) कार्यक्रममा आउनुपर्छ ।’ मैले भने ‘साँच्चै, तर मलाई त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।’ भने । त्यसपछि उनले भने “होइन यो तिम्रा लागि निक्कै राम्रो हुन्छ । मानिसहरूले तिमीलाई कैलो कपाल भएको ठूलो वक्षस्थलवाली मूर्ख सोच्छन् ।
तिमी यसका लागि ठिक्क हुन्छौ, किनकि तिमी यति ‘स्मार्ट’ व्यावसायिक छौ । तिमी लेख्छौ, निर्देशन गर्छौ र निर्माण पनि गर्छौ र निश्चय नै तिमी ‘हट’ र सुन्दर छौ ।’ मैले ‘यो कहिले हुँदैन । एन.बी.सी.ले कहिले पनि आफ्नो टिभी सोमा एक पोर्नस्टारलाई सहभागी गराउन दिँदैन ।’ त्यसपछि उनले आफूले त्यो गराउन सक्ने बताए । मैले त्यसो भए त्यो सम्भव बनाउन चुनौती दिएँ । उनले यसलाई हामी दुवै मिलेर सम्भव गराउनुपर्ने भनेँ । उनले त्यही भनेर एक वर्षसम्म मलाई आशमा झुलाइरहे । उनले भने, ‘हामी दुवै गएर तिम्रो सहभागिताको विषयमा छलफल गनुपर्छ भने ।
उनी गम्भीर थिए । सायद उनको दिमागमा यो कुरा आउँदा यो राम्रो हुनेछ भन्ने लागेको थियो होला र त्यो हुन पनि सक्थ्यो । निश्चय नै यो सनसनीपूर्ण हुने थियो । उनले मलाई सोधेको सोधै गरिरहे । उनले ‘के तिमी यो गर्छौ ?’ भनेर सोधे । मैले ‘तिमीलाई बताइदिऊँ कि म यो बारेमा सोचेर मेरो ऊर्जा नष्ट गर्दिनँ तर यदि तिमीमा यो गराउने सामर्थ छ भने म गर्नेछु” भनेँ ।
स्टोर्मी : पछि, हामी अझै बेडरुममा थियौं । हामीले केही बेर गफ गर्यौं । उनले निरन्तर ‘म तिमीलाई फोन गर्छु । म तिमीलाई पुनः भेट्न चाहन्छु । तिमी अद्भुद छौ । हामी मिलेर तिमीलाई कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ ।’ भनिरहे । त्यसपछि म निस्कँे । अर्को रात पुनः उनलाई एक पार्टीमा भेटेँ । पार्टी म बसेको होटेलमा भएको थियो । उनी बेन रोइथलिस्बर्गरसँग थिए । म त्यहाँ पुग्दा उनी पहिले नै बेनसँग थिए । उनले आफ्नो अङ्गरक्षक किथलाई मलाई फोन गर्न लगाएँ ।
फोनमा म आउँछु कि आउँदिन सोधिएको थियो । त्यहाँ पुगेर मैले किथलाई फोन गरेँ । किथले आफूहरू बसेको ठाउँमा लिएर गए । म त्यहाँ पुग्दा उनी बेनसँग बसिरहेका थिए, सायद निक्कै पहिलेदेखि गफिरहेका झैं देखिन्थे । त्यहाँ अरू थप एक दुई जना थिए । त्यति चर्चित होइनन् । बेनले त्यो वर्ष ‘सुपर बोल’ जितेका थिए । डोनाल्डले आफूलाई बेनसँग छुट्टिन अनुमति मागे । उनलाई निस्कनुपर्ने भयो । निस्कँदा उनले बेनलाई मेरो ख्याल गर्न भने । म त्यहाँ त्यस्तै पन्ध्र बीस मिनेट बसेँ । डोनाल्ड ट्रम्पले भनेकाले बेनले मलाई कोठासम्म छाडेका थिए ।
स्टोर्मी : त्यसको अर्को दिन म होटेलबाट हिँडेँ । केही आसा गरिनँ । निश्चय नै उनले त्यसपछि पनि फोन गरे । उनले सधैं मलाई ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट फोन गर्थे । उनलाई फोन गर्नका लागि उनले अङ्गरक्षक किथको नम्बर दिएका थिए । उनले आफ्नो अफिसकी सेक्रेटरी रोनाको नम्बर पनि दिएका थिए । त्यसबाट सिधै उनको अफिसमा फोन गर्न मिल्थ्यो । मैले फोन गर्दा अरू फोनमा व्यस्त भए वा त्यहाँ नभए पनि उनी दश मिनेट भित्र फोन फर्काउँथे । मलाई लाग्छ मैले फोन गरेको भनेर रोनाले उनलाई जानकारी गराउथिन् र त्यसपछि उनी मलाई फोन फर्काउँथे ।
उनले गर्ने फोन सधैँ ‘ब्लक्ड नम्बर’ हुन्थ्यो । उनी आफै भने मलाई प्रत्येक १० दिनमा फोन गर्थे । उनी सधैं मलाई ‘हनिबन्च’ भनेर सम्बोधन गर्थे । उनी फोन गर्दा ‘के छ हनिबन्च’ भन्थे । संवाद सधैँ उनी सुरु गर्थे । त्यसमा सधैँ मलाई फोन गर्ने बाहान हुन्थ्यो । जस्तो उनी फोन गर्ना साथ ‘भर्खर मैले तिम्रोबारे फलानो फलानोमा पढेँ वा तिम्रोबारेमा म्यागजिनमा समाचार आएको छ । मैले आज टिभी खोल्दा अनुमान गर्छौ टिभीमा को थियो ?’ कुरा उनले मलाई कतै पढेको वा देखेकोबाट सुरु हुन्थ्यो । त्यो समय म एकदमै व्यस्त थिए ।
त्यो समय मेरो बच्चा भएका कारणले म बिदामा थिएँ तर त्यो समय जताततै देखिन्थे । यिनै बाहना देखाएर उनी मलाई फोन गर्थे । ‘हे तिमी फलानो फलानोमा छौ, तिमीलाई थाहा छ ? हामी भेटेर मेरो कार्यक्रममा तिम्रो सहभागिताबारे कुरा गर्नुपर्छ ।’
स्टोर्मी : हो, मलाई लाग्छ त्यो जनवरी थियो । म त्यहाँ १५–२० मिनेट मात्र बसेँ । मलाई विमान समात्नु थियो । तर त्यो अवधिमा मैले रेड कार्पेटमा फोटो खिचाएँ । भित्र जाना साथ उनले मलाई सबैको अगाडि अँगालो हालेर चुमे । फेरि पनि किथले मलाई भी.आई.पी. क्षेत्रमा लगे । उनले मलाई केही बढी बस्न सकिन्छ कि भनेर सोधे ।
मैले नसक्ने उत्तर दिएँ । उनले मलाई मिस यू.एस.ए. (यो क्रार्यक्रमलाई डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गर्छन्) को निमन्त्रणा दिए । उनले मलाई कार्यक्रमको टिकट दिए । त्यसपछि म निस्किएँ । डोनाल्डसँग गफ गर्न त्यहाँ धेरै मान्छे झुम्मिरहेका थिए । म त्यो भीडमा एक थप हुन चाहँदिनँ थिएँ । मैले टाढैबाट बिदाइको हात हल्लाएँ र टिकटका लागि धन्यवादको सङ्केत गरेँ ।
स्टोर्मी : मैले कहिले पनि उनलाई देखिनँ । खासमा व्यक्तिगत रूपमा मैले कहिले पनि उनलाई भेटेको छैन । त्यसपछि उनीसँग मेरो अर्को भेट जुलाईको अन्त्यतिर भयो । उनले मलाई फोन गरे र बेवरर्ली हिल होटलमा भेट्न सकिन्छ कि भनेर सोधे र म गएँ । मेरो ब्वाइफ्रेन्डले मलाई त्यहाँसम्म गाडीमा पुर्याए । अङ्गरक्षक किथले लिनलाई बाहिरसम्म आए र भित्र लगे । उनको त्यहाँ निजी ‘बङ्ला’ थियो । त्यहाँ म पहिले गएको थिइनँ र त्यसपछि पनि त्यहाँ गएको छैन ।
हामीले त्यहाँ खाना खायौं र हामीले पुनः एक पटक डिनर खायौँ । यो पटक हामीले माछा खाएका थियौं । यो पटक पनि रक्सी खाएनौं । त्यो रातको अनौठो कुरा भनेको हामीले डिनर खाइरहेको टेबलबाट टिभी देखिन्थ्यो । टिभीमा उनी ‘सार्क विक’ हेरिरहेका थिए । उनी सार्कसँग धेरै डराउँथे । उनले गफका क्रममा ‘मैले धेरै च्यारिटीहरूमा पैसा दान गरेको छु तर म कहिले पनि सार्कलाई सहयोग गर्ने च्यारिटीमा पैसा दिदिनँ भने । मलाई संसारको सबै सार्कहरू मरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’
स्टोर्मी : हो, तर यो कति अनौठो हैन ? कति अजीव । त्यसपछि हामीले डिनर सकायौँ र टिभी राम्रोसँग देखिने गरी सोफामा बस्यौं । त्यसपछि उनले आफ्नो कार्यक्रममा मेरो प्रवेशवारेमा गफ सुरु गरँे । उनले आफ्नो कार्यक्रममा मलाई समावेश गर्ने कुरामा एक जनाले विरोध गरेर भिटो प्रयोग गरेको कुरा बताएँ । मैले ‘मैले भनेको थिएँ तिम्ले सक्दैनौँ ।’ भनेर भनेँ । म निक्कै रिसाएको थिएँ । उनले मेरो खुट्टा मुसार्दै भने ‘तिमीलाई थाहा छ, तिमी कति सुन्दर छौ भनेर । मलाई तिम्रो नाक मन पर्छ, यो सानो गन्टे मूला जस्तै छ ।’ मैले ‘तिम्ले गान्टे मूला भन्यौ ? कस्तो नचाहिने तुलना ?’
मैले उनलाई यसमा रिसाएको झैं गरेँ । उनले ‘होइन, होइन, होइन, होइन ! यो निक्कै राम्रो छ । यो नाक निक्कै ‘स्मार्ट’ देखिन्छ, चीलको जस्तो ।” मलाई रिस मरेको थिएन । म निक्कै रुखो रूपमा प्रस्तुत भइरहेकी थिएँ । उनले मेरो काधमा रहेको कपाल मिलाउँदै मेरो घाँटीमा चुमे । उनले मलाई ‘के तिमी बस्छौ ?’ साधें । मैले ‘होइन, मलाई जानु छ ।’ भनेँ र निस्किएँ । अङ्गरक्षक किथले मलाई कारसम्म पुर्याए । म त्यहाँ सम्भवत साढे दुई घण्टासम्म रहेँ । त्यो भेट पछि उनले मलाई कम फोन गर्न लागे । त्यसको केहीपछि उनको कार्यक्रममा जेन्ना जोनसनले प्रवेश पाएको जानकारी दिन फोन गरेका थिए । मैले कुनै भावना नभएझै प्रस्तुत भएँ ।
स्टोर्मी : किनकि म अहिले कोही अरूसँग छु, जोसँग म विशेष महसुस गर्छु । अनुवाद : श्रवण उप्रेती